कुन राशि भएका मानिसले कुन पेशा रोज्नु उपयुक्त ? – Sadhaiko Khabar
कुन राशि भएका मानिसले कुन पेशा रोज्नु उपयुक्त ?
प्रकाशित मिति: मंगलबार, बैशाख १३, २०७९ समय: १६:०९:४९
वास्तुशास्त्रमा कुनै पनि काम सुरु गर्नुपूर्व ज्योतिषसँग परामर्श लिने गरिन्छ। राशि अनुसार काम नगर्दा कतिपयलाई असफलता मिल्ने गर्दछ। ज्योतिषशास्त्रका अनुसार कुन राशिले कुन काम गर्दा शुभ हुन्छ ? सबैले एकपटक हेरौँ :
मेष : मेष राशि भएका व्यक्तिलाई व्यापारका तुलनामा जागिर राम्रो हुन्छ । बास्तुसँग सम्बन्धित काम गर्दापनि मेष राशिलाई फाइदा हुन्छ । सरकारी क्षेत्रमा रार्मो गर्न सक्ने यो राशिले फलामको काम गर्नु हुँदैन । यो राशिको शुभ रङ्ग रातो हो । रातो कपडा लाएर काम गर्ने यो राशिका व्यक्ति सफल हुन्छन् । यो राशिका मानिसले मुसुरोको दाल साइत हेरेर दान गर्नु शुभ मानिन्छ ।
वृष : यो राशि भएकाहरुलाई कलाकारिता फाप्छ । व्यापार गर्ने यो राशिका मानिसहरुले गाडीका पाठपूर्जा, इलेक्ट्रिक सामानको व्यापार, वा चलचित्र वा सङ्गीतसंग सम्बन्धित व्यापार गर्यो भने निकै फाप्छ । सेतो रङ्ग यो राशिको शुभ रंग हो । किरानाको व्यापार पनि फाप्ने यो राशि भएका व्यक्तिहरुले हरियो कपडा हत्तपत्त प्राय: गर्नु हुन्न । यो राशिलाइ पनि समग्रमा जागिर नै फाप्छ ।
कर्कट : यो राशि भएका व्यक्तिले जागिर भन्दा व्यापार नै गरेको रार्मो । जलीय वस्तु, सख्खर, चामल, चाँदी, शिक्षण, वस्त्र, स्त्रीको कपडा, रेशम, सौन्दर्य सामाग्री, रंग, लगायतका बस्तुको कारोबार गर्दा यो राशिलाई फाइदा हुन्छ । जागिर नै गर्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्र राम्रो छ ।
कन्या : कन्या राशि भएका व्यक्तिलाई जागिरको तुलनामा व्यापार नै फाप्छ । चिनीजन्य बस्तुको व्यापार गर्दा यो राशिलाई निकै फाइदा पुग्छ।
तुला : यो राशिलाई जागिर बढी फाप्छ । यो राशि भएका व्यक्तिले अभियन, संगीत, सेना, व्यवस्थापन, कानून, बैंक, बिमा, फाइनान्स, मेसिनरी र कम्प्युटरको काम गर्दा निकै राम्रो हुन्छ । व्यापार नै गर्ने हो भनेपनि यहि क्षेत्रसंग सम्बन्धित काममा हात हाले फाइदाजनक हुन्छ।
वृश्चिक : यो राशि भएका व्यक्तिलाई जागिर बढी फाप्छ । रक्षा, कानून, सामाजिक सेवा, राजनीति क्षेत्र यो राशिलाई फाप्छ । रातो रंग शुभ रंग भएको यो राशिका व्यक्तिहरुलाइ सरकारी जागिर पनि निकै फाप्छ।
धनु : सुनचाँदीको व्यवसाय, किराना, सामाजिक सेवा, अध्यात्म गुरु, म्यानेजर लगायतका काम गर्दा यो राशिलाई निकै राम्रो हुन्छ । यो राशिलाई पनि जागिरभन्दा व्यापार राम्रो हुन्छ। व्यापारमा पनि ठेक्कापट्टामा लाग्ने हो भने यो राशि भएका व्यक्तिले निकै राम्रो आम्दानी गर्छन्।
मकर : यो राशिलाई पनि प्राय व्यापार नै फाप्छ । मेशिनरी, मर्मतको काम, कम्प्युटर, सिभिल इञ्जिनियर, आर्किटेक्ट, वास्तु विज्ञान, गुप्तचर, वैज्ञानिक जस्ता पेशामा यो राशिलाई निकै फाप्छ । यो राशिले पानीसंग सम्बन्धित काम भने नगरेको राम्रो।
मीन : यो राशि भएका व्यक्तिलाई बढी जागिर फाप्छ । भेइकल, गुप्तचर विभाग, फायर सर्भिस र अदालती सेवामा यो राशिलाई सफलता प्राप्त हुन्छ ।